Sida loo doorto heerka mobilkaaga. Talo iyo xallinta shakiga | Ragga Stylish
Maanta qof walba wuxuu leeyahay mobilo. Waxay u noqdeen aalad lama huraan u ah dhammaan kuwa doonaya in lala xiriiro. Habka aan u wada xiriirnona wax badan baa iska beddelay tan iyo markii ay soo gaareen taleefannada casriga ah iyo horumarinta tikniyoolajiyadda. Tani waa qodobka ah in shirkadaha moobiilku aysan hadda bixin kaliya sicir-dhimista wicitaannada, laakiin sidoo kale soo bandhigaan isticmaalka megabytes ee internetka. Xaqiiqdii in kabadan hal mar ah heerka mobilada dhamaadka bisha.
Sidaa darteed, waxaan u hibeyn doonnaa qodobkan si aan kuu baro sida loo doorto heerka mobilkaaga.
1 Baahiyahaaga marka hore
2 Dhinacyada la tixgelinayo marka la dooranayo sicirka mobilka
2.1 Mid gaar loo leeyahay ama iskiis ah
2.2 Kaarka ama isticmaalaha qandaraaska
2.3 Adeegso in aad siinayso taleefanka gacanta
2.4 Moobiil cusub ama shirkad beddel
3 Waxyaabaha kale ee la tixgelinayo marka la dooranayo qiimaha moobaylka
Baahiyahaaga marka hore
Waxa ugu horreeya ee laga fiirsado markaad dooranayso sicirka moobiilku waa baahiyahaaga. Haddii aad ka mid tahay dadka taleefannada wax badan ka wac, waxay kugu habboon tahay kan bixiya daqiiqado bilaash ah ama wicitaano aan xad lahayn. Si aad si fiican u ogaatid waxa ay yihiin baahiyahaagu, waa inaad si taxaddar leh u falanqeeysaa isticmaalka biilasha moobaylka. Waa inaad falanqeysaa imisa daqiiqo ayaan ku qaadanaa, megabyada internetka ama fariimaha qoraalka.
Arrin kale oo ah in laga fiirsado ayaa ah inaad moobil cusub heleyso ama aad iskaa u shaqeysato. Xaaladahaas oo kale, waa inaad tixgelisaa qodobo dheeri ah oo dheeri ah markaad dooranayso sicirka. Doorashada sicirka mobilada waa dhib badan tahay. Shirkadaha oo dhami waxay bixiyaan dalabyo gaar ah oo adiga ku wareeri kara. Waa inaad si dhow u eegtaa dalab kasta oo suuqa yaal oo aad tixgelisaa isticmaalka aad siin doontid. Sidan oo kale, waxaan ku maareeynaa inaan hagaajino kharashka aan bixin doonno.
Mid ka mid ah howlaha inta badan la qabto si loo ogaado nooca isticmaale ee aad tahay inaad ka jawaabto su'aalaha qaarkood. Su’aalahaasi waa:
Waxaad tahay isticmaale gaar ah ama iskiis u taagan.
Waxaad noqon doontaa kaar ama isticmaale qandaraas.
Maxaad taleefanka siineysaa?
Haddii aad dooneysid inaad hesho mobiil cusub ama aad si fudud u beddeleyso shirkadaha.
Waxay kuxirantahay jawaabta su'aalahan, waxaad awoodi doontaa inaad sifiican u ogaatid waxa uu yahay astaantaadu. Waxaan ku falanqeyn doonnaa iyaga faahfaahin dheeraad ah.
Dhinacyada la tixgelinayo marka la dooranayo sicirka mobilka
Mid gaar loo leeyahay ama iskiis ah
Haddii aad iskaa u shaqeysato oo aad iskaa u shaqeysid, waxaa lagugula talinayaa inaad doorato qaar ka mid ah dalabyada loogu talagalay kuwa iskood u shaqeysta. Qiimayaashani waxay tixgelinayaan in, sida caadiga ah, aad xiriir joogto ah la yeelanayso macaamiisha, wada-hawlgalayaasha ama alaab-qeybiyeyaasha. Tani waxay ka dhigeysaa heerka mobilada Waxaa loogu talagalay inay awood u yeelato fidinta qaansheegadka iyo wicitaanada. Waxaa jira dalabyo badan oo loo fidiyo dadka iskood u shaqeysta oo doorashada tan ayaa ahmiyad weyn u leh marka ay timaado keydinta biilka taleefankaaga gacanta.
Kaarka ama isticmaalaha qandaraaska
Maanta dad yar ayaa wali isticmaala kaarka oo waa inay ku dheellitiraan dheelitirkooda. Si kastaba ha noqotee, waa inaad si xikmad leh u kala doorataa noocyada qandaraasyada ee aad na siiso. Waa inaad si fiican u doorataa isticmaalka aad samaynaysid celcelis ahaan bishii oo aad laxiriirto waxa ugu yar ee ay tahay inaad bixiso xitaa haddii aadan isticmaalin dhammaan adeegyada kujira sicirka mobilada.
Adeegso in aad siinayso taleefanka gacanta
Waxay kuxirantahay isticmaalka aad siineyso mobilka, waxaad ubaahan doontaa hal qiime ama mid kale. Haddii aad ka mid tahay kuwa sida joogtada ah taleefanka ugu soo wacaya, waxaad u baahan doontaa sicirka mobilada oo leh daqiiqado bilaash ah ama aan xad lahayn. Dadka noocan ah waa wax aad u xiiso badan in la kiraysto sicir fidsan, maadaama wicitaanada wicitaanada sidoo kale badanaa lagu daro, markaa waa inaadan ka walwalin in biilkaaga la kordhin doono adiga oo wicitaano badan sameeya.
Waxa kale oo jira dad badanaa wicitaanada si isdaba joog ah u sameeya laakiin waqti gaaban ah. Halkani waa halka aad xiisaynayso qiimayaashaas oo ay ku jiraan samaynta wicitaan. Haddii aad ka mid tahay kuwa soo waca oo wicitaanadu dheer yihiin, waxaad xiiseyn doontaa inaad yeelato daqiiqado bilaash ah ama wicitaano aan xad lahayn. Muuqaal kale oo muhiim ah ayaa ah Dooro dadka aad wacdo inta badan. Waxaana jira shirkado badan oo mobilada bixiya wicitaano ah 0 senti daqiiqadiiba isla markaana aan wicitaan u samayn kuwa isticmaala isla shirkadaas.
Haddii, dhinaca kale, aad ka mid tahay dadka kaliya ee mobilada u adeegsada internetka, waxaa lagama maarmaan ah in la kireeyo qiime leh GB ku filan oo lagu wareego. Waxaa jira sicirrada mobilada oo aad ku iibsan karto gunooyin dheeri ah si aad u sii wadato xawaaraha ugu sarreeya xitaa adiga oo wada cunaya GB oo dhan.
Moobiil cusub ama shirkad beddel
Haddii aad iibsaneyso mobilo cusub waxaa jira dalabyo badan oo hordhac ah oo ku saabsan sicirka mobilka. Badanaa dalabyadan waxaa la socda wicitaano jaban, riwaayado qiimo jaban ku kordhay, aasaasida wicitaanka bilaashka ah, saacado jaban, iwm Halkani waa halka ay lagama maarmaanka u tahay in la ogaado nooca isticmaale ee aad tahay si aad ula qabsatid dalabka kugu habboon.
Dhinaca kale, haddii aad ka mid tahay kuwa beddelaya shirkadda sidoo kale waxaa jira dalabyo wanaagsan oo wanaagsan. Dalabyadan waxaa weheliya qandaraas guurguura oo sidoo kale inta badan la socda fiber optics oo loogu talagalay internetka internetka ama kanaalada telefishanka. Haddii aad ka mid tahay kuwa doonaya inay helaan mobilo cusub ama aad u beddeleyso shirkadaha, Qiimaha liinta uu ikhtiyaarka ugu fiican ee la xiriira tayada iyo qiimaha. Guud ahaan waxay bixiyaan adeegyo isku duuban oo ADSL ah ama dalabyo fiber optic ah oo ay weheliso heerka mobilkaaga. Haddii aad ka mid tahay kuwa ku xeel dheer tiknoolajiyada, hubaal halkan waxaad ka heli doontaa qiime kugu habboon.
Waxyaabaha kale ee la tixgelinayo marka la dooranayo qiimaha moobaylka
Ugu dambeyntii, qaar ka mid ah dhinacyada muhiimka ah markaad dooranayso sicirkaaga mobilada waa kuwan soo socda:
Daboolida: waxaa jira waqtiyo ay tahay inaad guurto oo aad u baahan tahay cod wanaagsan iyo daboolida macluumaadka moobilka ee magaalooyinka waaweyn. Xulo si fiican u xulo caymiska taleefanka ee shirkadda aad dooratay si aad u ogaato haddii ay leedahay kaabayaal u gaar ah aagga aad u adeegsanayso terminaalka kana faa'iideyso daboolistaan.
Wac lambarrada caalamiga ah: Waxay kuxirantahay shirkada iyo qiimaha mobilada ee aad dooratay, qiimaha wicitaanada dibada way kala duwanaan karaan.
Mid ka mid ah khaladaadka ugu waaweyn ayaa ah shaqaaleeyaan wax ka badan intii loo baahnaa. Waa markaa meesha aad ku bixinaysid wax aadan isticmaalin. Sidoo kale inta badan waa qalad in aan laga faa'iideysan adeegyada ama dallacaadaha bilaashka ah ee ay shirkadaha kuu soo bandhigaan.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad si fiican u dooran kartid heerka mobilada kugu habboon.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Tiknoolaji » Sida loo doorto heerka mobilkaaga